Maadaama Linux IRC ay si ku meelgaar ah ugu guureyso FreeNode | Laga soo bilaabo Linux
Sida dad badani ogyihiin, gudaha Laga soo bilaabo Linux waxaan leenahay kuweena leeyahay server IRC, laakiin sababo kala duwan awgood ayaa loo jaray hadda. Taasi waa sababta aan u ogaado inaan si ku-meel-gaar ah ugu dhisnay saldhigyada FreeNode.
Si loo helo waxay kaliya u baahan yihiin macmiil IRC sida Quassel, Wadahadal, XChat ama xataa Pidgin. Eeg kanaalka #Xayeysiis ????
Faahfaahinta xiriirku waa sida soo socota:
Dekedda: 6665 o 7000
Waan ku sugeynaa !!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Maaddaama Linux IRC ay si ku meelgaar ah ugu guureyso FreeNode
Sidoo kale Bootooyinka aan jecel nahay way soo laabteen: CalicoBot iyo MuzaBot (kaliya ilaa iyo inta pc-ga uu ku xiran yahay xiriirna leh)
Go'aan wanaagsan, in kastoo xilligan aan ku xirnaan doono barnaamijkeyga Android.
Sidaas ha noqoto. Waxaan rajeynayaa in dhibaatooyinka ka jira IRC lafteeda si dhakhso ah loo xallin doono.
Markii aan isku xidho weligood qofna ma jiro: '/
Hadda waxaa jira.
Hadda waxaa jira in ka badan 10 isticmaale.
ku soo dhawow freenode
Hagaag, waan sii wadi lahaa isticmaalka freenode, waa wax aad ufiican, sidaa darteedna uma baahnid inaad dhigatid khadadka qaabeynta ee mashiinka kumbuyuutarka ee Linux, markasta oo aad macaamiisha badasho.
Waad ilaawday, sheeg "irssi":]
+1 .. ..Waxaan moodayay inaan isla wax dhaho .. 😀